ရွေ့လျားနိုင်သော ဓာတ်လှေကား ပလပ်ဖောင်း
ကိုယ်ပိုင်တွန်းကန်အား ကွေးညွှတ်ထားသော လက်မောင်းများ ဝေဟင်လုပ်ငန်းခွင်
မိုဘိုင်း လွှင့်တင်ခြင်း ပလပ်ဖောင်း
လွှင့်တင်ခြင်းပလပ်ဖောင်း၏ အမျိုးအစားခွဲခြင်းနှင့် အခြေအနေ
သယ်ယူခြင်းပလပ်ဖောင်းကို ကုန်းလမ်းတံတား၊ သယ်ယူပို့ဆောင်ခြင်းနှင့် ကုန်တင်ယာဉ်ကြားတွင် ပေါင်းကူးရန် အရန်ပစ္စည်းများ တင်ဆောင်ခြင်းနှင့် သယ်ယူခြင်းဆိုင်ရာ အရန်ပစ္စည်းကိရိယာများဟုလည်း လူသိများသည်။ သယ်ဆောင်ခြင်းပလပ်ဖောင်းသည် ယခုတွင် အသုံးအများဆုံး မိုဘိုင်း unloading ပလပ်ဖောင်း၊ ပုံသေတင်ဆောင်သည့်ပလပ်ဖောင်းဟူ၍ နှစ်မျိုးရှိသည်။ နိယာမမှာ အခြေခံအားဖြင့် ဟိုက်ဒရောလစ် pr ဖြစ်သည်။ .။
JWT Lifting စက် ပြုပြင်ထိန်းသိမ်းမှု နှင့် နွေရာသီတွင် မည်ကဲ့သို့ ထိန်းသိမ်းရမည်
ဓာတ်လှေကား၏နေ့စဥ်ပြဿနာများနှင့် ပြုပြင်ထိန်းသိမ်းမှု 1. လစဉ်ထိန်းသိမ်းခြင်း ဓာတ်လှေကားပလပ်ဖောင်းကို ပြုပြင်ထိန်းသိမ်းစဉ်အတွင်း ဝန်ထမ်းများသည် ဓာတ်လှေကားရုတ်တရက်ပြုတ်ကျပြီး အသေအပျောက်များမဖြစ်အောင် lifting platform အတွင်းတွင် လုပ်ဆောင်ကြသည်။ A. Rollers၊ Intermediate Shaft နှင့် Bearings၊ Cylinder Pin Shaft နှင့်...
ဆောင်းဦးအလယ်ပိုင်း ပြန်လည်ဆုံဆည်းရာညတွင် လသည် ကောင်းချီးမင်္ဂလာကို ထွန်းလင်းတောက်ပစေပါသည်။
——Jinwantong Machinery Co., Ltd. မှ လူတိုင်းလူတိုင်း ထာဝစဉ်အသက်ရှင်ကြမည်ဟု ဆုမွန်ကောင်းတောင်းအပ်ပါသည်။ ရှေးခေတ်ကတည်းက ဆန်းကြယ်သော ကုလားကာအောက်တွင် ကောင်းကင်တွင် တောက်ပနေသော လကို ကဗျာဆရာများက ရွတ်ဆိုကြပြီး လူများက ကိုးကွယ်ကြသည်။ လူတွေဟာ အမြဲတမ်း အံ့သြမှုတွေနဲ့ ပြည့်နှက်နေခဲ့တယ်...
အသုံးပြုမှုသက်တမ်းကြာရှည်စေရန် အလူမီနီယံအလွိုင်းဓာတ်လှေကားအတွက် ကြိုတင်ကာကွယ်မှုများ
1. ပြုတ်ကျခြင်းဘေးကင်းရေးကိရိယာ ပြုတ်ကျခြင်းဘေးကင်းရေးကိရိယာသည် ဆောက်လုပ်ရေးလွှင့်ထူခြင်း၏ အရေးကြီးသောအစိတ်အပိုင်းတစ်ခုဖြစ်ပြီး လှောင်အိမ်ပြုတ်ကျမှုဖြစ်ပွားခြင်းအား ဖယ်ရှားရန်နှင့် စီးနင်းသူ၏ဘေးကင်းမှုကို သေချာစေရန် ၎င်းကို အားကိုးရန် လိုအပ်ပါသည်။ ထို့ကြောင့် ပြုတ်ကျခြင်းဘေးကင်းရေးကိရိယာ၏ စက်ရုံစမ်းသပ်မှု...
အလူမီနီယံအလွိုင်းဓာတ်လှေကား၏ အဖြစ်များသော ပြဿနာများ
အလူမီနီယံအလွိုင်း၏ အဖြစ်များသော ပြဿနာများ ဓါတ်လှေကား ရှင်းလင်းရေး အလူမီနီယမ် အလွိုင်းကို အသုံးပြုပြီးနောက် ဓာတ်လှေကား၏ ကိုယ်ထည်ကို သန့်ရှင်းပါ။ ရုတ်သိမ်းခြင်းလုပ်ငန်းစဉ်အတွင်း ကျန်ရှိသည့် အချို့သော ပစ္စည်းအကြွင်းအကျန်များသည် ဓာတ်လှေကားကို ပျက်စီးစေနိုင်သည်။ ရှပ်နှင့် အခြားအစိတ်အပိုင်းများကို အင်ဂျင်ဆီဖြင့် လစဉ် ချောဆီပေးခြင်းသည် အကောင်းဆုံးဖြစ်ပြီး ဓာတ်လှေကားအား ရုတ်သိမ်း၍မရသော သို့မဟုတ် ...
အကောင်းဆုံး lifting platform ဖြစ်သည့် Jin Wantong Hydraulic Lift Factory Direct Sales
ဘယ် lifting platform က ပိုကောင်းလဲ။ Jinwantong ဟိုက်ဒရောလစ်ဓာတ်လှေကားများသည် "စက်ရုံတိုက်ရိုက်ရောင်းချခြင်း" ဖြစ်သည်။ ကျွန်ုပ်တို့၏ကုမ္ပဏီသည် မြင့်မားသောထုတ်လုပ်မှုထိရောက်မှု၊ ခိုင်ခံ့သောတည်ငြိမ်မှု၊ ကျယ်ပြန့်သောအသုံးချပလီကေးရှင်းအကွာအဝေးနှင့် ထူးထူးခြားခြားထုတ်လုပ်သည့်အကျိုးသက်ရောက်မှုတို့ဖြင့် အမျိုးမျိုးသော ရုတ်သိမ်းသည့်ပလပ်ဖောင်းများကို လွတ်လပ်စွာသုတေသနပြုပြီး တီထွင်ထုတ်လုပ်ပါသည်။
အလူမီနီယံအလွိုင်းဓာတ်လှေကား ပြုပြင်ထိန်းသိမ်းမှု ရှင်းလင်းချက်
အလူမီနီယံအလွိုင်းဓာတ်လှေကားကို ဘယ်လိုထိန်းသိမ်းမလဲ။ ကျွန်ုပ်တို့သည် အလူမီနီယမ်အလွိုင်းဓာတ်လှေကားကို ဝယ်ယူခဲ့ပြီး အချိန်အတိုင်းအတာတစ်ခုကြာပြီးနောက် အသုံးပြုရန်မလွယ်ကူပါ။ အကြောင်းရင်းကို သိလား။ အဘယ်ကြောင့်ဆိုသော် အလူမီနီယံအလွိုင်းဓာတ်လှေကားကို အသုံးပြုပြီးသည့်နောက်တွင် ထိန်းသိမ်းရန် လိုအပ်သောကြောင့် ဖြစ်သည်။ တစ်ချက်ကြည့်လိုက်ရအောင်...
ဟိုက်ဒရောလစ် lifting platform ကို ပြုပြင်ထိန်းသိမ်းခြင်း၏ အဓိကအချက်များ
ပုံမှန်အခြေအနေများတွင်၊ ပုံမှန် ဟိုက်ဒရောလစ်ဓာတ်လှေကားထုတ်လုပ်သူများသည် ဟိုက်ဒရောလစ်ဓာတ်လှေကားပလပ်ဖောင်းကို တပ်ဆင်ပြီးနောက်၊ ဖောက်သည်သည် ဓာတ်လှေကားကို နေ့စဉ်ထိန်းသိမ်းရန်နှင့် သက်တမ်းတိုးရန်အတွက် ဖောက်သည်အား ဟိုက်ဒရောလစ်ဓာတ်လှေကားပြုပြင်ထိန်းသိမ်းမှုလမ်းညွှန်စာအုပ်ကို ဖောက်သည်ထံတင်ပြမည်ဖြစ်သည်။
ဟိုက်ဒရောလစ် lifting platform ၏ စွမ်းဆောင်ရည်ကို မြှင့်တင်ပါ။
ဟိုက်ဒရောလစ် lifting platform ၏ စွမ်းဆောင်ရည်ကို မည်သို့မြှင့်တင်မည်နည်း။ မကြာသေးမီက အချို့သောဖောက်သည်များသည် လုပ်ငန်းစွမ်းဆောင်ရည်ကို ထိခိုက်စေသည့် ဟိုက်ဒရောလစ်ဓာတ်လှေကားများအသုံးပြုမှုတွင် မကြာခဏဖြစ်ပေါ်လေ့ရှိသော ချို့ယွင်းချက်များနှင့်ပတ်သက်၍ ကျွန်ုပ်တို့၏ကုမ္ပဏီနှင့် တိုင်ပင်ဆွေးနွေးကြပြီး စက်၏အရည်အသွေးကိုပင် သံသယရှိကြသည်။
ကုမ္ပဏီ: Jinan Jinwantong စက်ပစ္စည်းထုတ်လုပ်ရေး Co., Ltd.
လိပ်စာ : Yangjingju East Road, Jibei Street, Jiyang County (Huayang Road အရှေ့ဘက်)
မိုဘိုင်းဖုန်း/WhatsApp: +86 13356671675
မိုဘိုင်းဖုန်း : +86 13361037236